एनआईसी एशिया लघुवित्तको नाफा ५६ करोडभन्दा बढी - Aarthiknews
एनआईसी एशिया लघुवित्तको नाफा ५६ करोडभन्दा बढी
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म एनआईसी एशिया लघुवित्तले रू. ५६ करोड ४७ लाख ६ हजार खुद नाफा गरेको छ । कम्पनीको सार्वजनिक अपरिस्कृत वित्तीय विवरण अनुसार अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्ष २२१ दशमलव ४९ प्रतिशत बढी खुद नाफा गरेको हो । अघिल्लो वर्ष सो अवधिसम्म कम्पनीले रू. १७ करोड ५६ लाख ५४ हजार खुद नाफा गरेको थियो ।
कम्पनीको सञ्चालन नाफा पनि अघिल्लो वर्षभन्दा २२९ दशमलव २० प्रतिशत बृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्ष रू. २५ करोड ७३ लाख ५९ हजार सञ्चालन नाफा गरेको कम्पनीले गत वर्ष रू. ८४ करोड ७२ लाख २१ हजार सञ्चालन नाफा गरेको थियो । गत वर्ष खराब कर्जा संकलन शून्य रहेको कम्पनीले सम्भावित जोखिम शिर्षकमा अघिल्लो वर्षभन्दा १४३ प्रतिशत बढी रू. २५ करोड ९५ लाख ७९ हजार छुट्याएको छ ।
कम्पनीको हाल चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब ७३ करोड ९४ लाख ४० हजार रहेको छ । जगेडा कोष रकम अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्ष २३३ दशमलव ५६ प्रतिशत बढी रू. ९३ करोड ५२ लाख ३२ हजार कायम भएको छ ।
कम्पनीको निक्षेप संकलन अघिल्लो वर्षभन्दा १८० दशमलव २४ प्रतिशत बढी रू. २ अर्ब ६७ करोड ७९ लाख २० हजार रहेको छ भने कर्जा प्रवाह अघिल्लो वर्षभन्दा १४० प्रतिशत बढी रू. १६ अर्ब ८९ करोड १६ लाख ६७ हजार भएको छ । गत वर्ष कम्पनीले अघिल्लो वर्षभन्दा १६७ प्रतिशत बढी रू. १५ अर्ब ५९ करोड ७० लाख ५ हजार कर्जा सापटी लिएको छ ।
अघिल्लो वर्ष शून्य दशमलव ९९ प्रतिशत रहेको निष्क्रिय कर्जा गत वर्ष शून्य दशमलव ९३ प्रतिशत रहेको छ । कम्पनीको वार्षिक प्रतिशेयर आम्दानी रू. ३२ दशमलव ४६ र प्रतिशत नेटवर्थ रू. १५३ दशमलव ८४ रहेको छ ।